Yintoni Ukholo Njengoko IBhayibhile Ichaza?
Ukholo yi-Fuel yoBomi bobuKristu
Ukholo luchazwa njengenkolelo enokuqiniseka okuqinileyo; inkolelo eqinileyo kwinto engabikho ubungqina obubonakalayo; ukuthembela ngokupheleleyo, ukuzithemba, ukuthembela, okanye ukuzinikela. Ukholo luphambene nokungabaza.
IWebster World College Dictionary ichaza ukholo ngokuthi "inkolelo engaqinisekiyo engafuneki ubungqina okanye ubungqina; inkolelo engaqinisekiyo kuThixo, iinkonzo zonqulo."
IBhayibhile inika inkcazelo emfutshane yokholo kumaHebhere 11: 1:
"Ngoku ukholo luqinisekile malunga nento esithembayo nento esingazibonayo." ( NIV )
Siyintoni ithemba? Siyathemba ukuba uThixo uthembekile kwaye uzukisa izithembiso zakhe. Sinokuqiniseka ukuba izithembiso zakhe zensindiso , ubomi obungunaphakade , kunye nomzimba ovusiweyo kuya kuba ngenye imini kusekelwe kuThixo.
Inxalenye yesibini yale nkcazo ivuma ingxaki yethu: UThixo akabonakali. Asikwazi ukubona izulu. Ubomi obungunaphakade, obuqala ngokusindiswa kwethu ngabanye apha emhlabeni, nento into esingayiboniyo, kodwa ukholo lwethu kuThixo lusenza siqiniseke ngezi zinto. Kwakhona, asinakubali ubungqina bobunzululwazi, obubonakalayo kodwa ekuthembekeni ngokupheleleyo kobuntu bukaThixo.
Sifunda phi ngomlingiswa kaThixo ukuze sibe nokholo kuye? Impendulo ecacileyo yiBhayibhile, apho uThixo ezityhila ngokuzeleyo kubalandeli bakhe. Yonke into esifanele siyazi ngayo ngoThixo ifunyanwe khona, kwaye ichanekile, enzulu imifanekiso yendalo yakhe.
Enye yezinto esizifunda ngoThixo eBhayibhileni akakwazi ukuxoka. Ingqibelelo yakhe iphelele; Ngoko ke, xa echaza ukuba iBhayibhile iyinyaniso, sinokuyamkela loo mazwi, esekelwe kumlingiswa kaThixo. Iindinyana ezininzi eBhayibhileni akunakwenzeka ukuqonda, kodwa amaKristu ayawamkela ngenxa yokholo kuThixo othembekileyo.
Ukholo: Kutheni Sifuna?
IBhayibhile yincwadi yokufundisa yobuKristu. Akugcini nje ukuxelela abalandeli ukuba babe nokholo kuye kodwa kutheni sifanele sibe nokholo kuye.
Kwimpilo yethu yemihla ngemihla, amaKristu ahlaselwa kuwo onke macala ngamathandabuzo. Ukungathandabuzeki kwakuyimfihlelo encinane engcolileyo yompostile uTomas , owaye wahamba noYesu Kristu iminyaka emithathu, ephulaphule imihla ngemihla, ekhumbula izenzo zakhe, aze amlinde ephakamisa abantu abafileyo . Kodwa xa kufike kuvuko lukaKristu , uTomas wayefuna ubungqina obuphathekayo:
Emva koko (uYesu) wathi kuTomas, "Faka apha umnwe wakho apha; zibona zam izandla. Gcina isandla sakho uze usibeke kwicala lam. Yeka ukungabaza nokukholwa. "(Yohane 20:27, NIV)
UTomas wayengumntu onzima kakhulu weBhayibhile. Ngakolunye uhlangothi lwengqekembe, kumaHebhere isahluko 11, iBhayibhile ichaza uluhlu olumangalisayo lwabaqhawe baseTestamente Endala kwivesi elidla ngokuba libizwa ngokuba yi "Faith Hall of Fame ." La madoda nabesifazane kunye namabali abo baphuma ukukhuthaza nokulingeni ukholo lwethu.
Kwiimakholwa, ukholo luqala ukhenketho lweziganeko ekugqibeleni ezikhokelela ezulwini:
Ngokukholwa ngobabalo lukaThixo , amaKristu axolelwe. Sifumana isipho sosindiso ngokholo kumbingelelo kaYesu Kristu .
Ngokuthembela ngokupheleleyo kuThixo ngokukholwa kuYesu Kristu , amakholwa asindiswa kwisigwebo sikaThixo sesono kunye nemiphumo yaso.
Ekugqibeleni, ngobabalo lukaThixo siyaqhubeka siba ngamaqhawe okholo ngokulandela iNkosi kwiintlanga ezinkulu ekukholweni .
Ukholo: Sifumana Njani?
Ngokudabukisayo, enye yeengcamango ezingalunganga ebomini bobuKristu kukuba sinokholo ngokwabo. Asikwazi.
Sizabalazela ukubeka ukholo ngokwenza imisebenzi yobuKristu, ngokuthandaza ngakumbi, ngokufunda iBhayibhile ngakumbi; ngamanye amagama, ngokwenza, ukwenza, ukwenza. Kodwa isicatshulwa sithi asiyiyo indlela esiyifumana ngayo:
Ngokuba ngenxa yenceba nisindisiwe, ngokholo-kwaye akuveli kuni, sisipho sikaThixo-kungekhona ngemisebenzi , ukuze kungabi namnye oqhayisayo. " ( Efese 2: 8-9, NIV)
UMartin Luther , omnye wabaguquleli abangamaKristu bokuqala, ukholo oluqhubekayo luvela kuThixo osebenza kuthi kwaye akukho mthombo: "Cela kuThixo ukuba asebenze ukholo kuwe, okanye uya kuhlala ngonaphakade ngaphandle kokholo, kungakhathaliseki ukuba ufuna ntoni, kuthetha okanye ukwenza. "
ULuther nabanye abafundisi bezenkolo babeka isabelo esikhulu kwisenzo sokuva iindaba ezilungileyo zishunyayelwayo:
"Kuba uIsaya uthi, 'Nkosi, ngubani na okholelwe oko akuvile kuthi?' Ngoko ukholo luvela kukuva, nokuva ngezwi likaKristu. " ( Roma 10: 16-17, ESV )
Yingakho intshumayelo yaba yinto ephakamileyo yeenkonzo zonqulo zamaProthestani. ILizwi elithethiweyo likaThixo linamandla amakhulu okwakha ukholo kulaphulaphuli. Unqulo lweenkcubeko lubalulekile ekukhuthazeni ukholo njengoko iLizwi likaThixo lishunyayelwa.
Xa uyise ogxekayo efika kuYesu ecela ukuba unyana wakhe onamademon aphiliswe, le ndoda yathetha isibongozo esibuhlungu:
"Ngokukhawuleza uyise wenkwenkwe wathi, 'Ndiyakholwa; ndincede ndinqobe ukungakholwa! "( Marko 9:24, NIV)
Lo mntu wayesazi ukuba ukholo lwakhe lubuthathaka, kodwa wayenengqiqo ngokwaneleyo ukuba aphendukele kwindawo elungileyo yoncedo: uYesu.
Uqinisekiso olupheleleyo lokholo-Hebhere 10: 19-22
Qinisekile Ngokholo - Isaya 7: 9
Ukulondoloza ukholo - Yakobi 2:14
Ngena ngeNdlela elula-Mateyu 7: 13-14
Ivesi leMini - imini 120
UYesu Ithemba Lethu
Iingcaphuno zoBawo Osekelwe kwiNkolo
Iinqununu ezi-5 eziphezulu malunga namaYuda kunye nobuYuda
Ukuqhawula kwi-Shoes Pointe
Barack Obama Iikhathuni
Iyintoni Ingcaciso ethi "Into" kwiFizikiki?
I-SAT Amanqaku okuthelekiswa kwamkelwa kwiiKholeji zase-Illinois
Izidlo kunye neSilvaware - IsiGrazil Isigama
Inkcazo yeCandelo lokuThatha
Ubomi bePowhatan Indian Pocahontas
Iingcaphuno ezivela kuMnu Jane Austen kaMnu Darcy
Iimvavanyo zeeNtshonalanga ezili-10
Ithempeli laseBorobudur | Java, Indonesia
Amazwi asetyenziswa kwiincwadi
Yiyiphi i-Skydiver efuna ukuyiqonda nge-Skydiving Canopy Lines
I-PGA Tour Umqhubi weSikhumbuzo
Indlela yokuPhakamisa isikhala sakho sephepha usebenzisa i-Microsoft Word